स्वदेश फिर्तीको प्रतीक्षामा ३ हजार नेपाली महिला, ४० दिनदेखि कुवेतका सेल्टरमा – Health Post Nepal
स्वदेश फिर्तीको प्रतीक्षामा ३ हजार नेपाली महिला, ४० दिनदेखि कुवेतका सेल्टरमा
२०७७ जेठ २७ गते १९:१७
कुवेतमा काम गर्न गएका ३ हजारभन्दा धेरै नेपाली महिला अलपत्र परेका छन्। नेपाल सरकारले ल्याउन तत्परता नदेखाउँदा नेपाली महिलाहरू सेल्टरमा बस्न बाध्य भएका हुन्।
४० दिनदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कुवेतमा विभिन्न सहस्थित क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेका ३ हजार नेपाली महिला कामदारलाई फर्काउन सरकारले चासो देखाएको छैन।
कुवेत सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणको प्रबन्ध गरेको छ। ३ हजार महिला कामदार अहिलेसम्म सुरक्षित रूपमा बसिरहेका छन्।
तर, कुवेत सरकारले सम्पूण खर्च दिने भने पनि नेपाल सरकारले चार्टर्ड विमान पठाउन र उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन पहल गरेको छैन।
तत्काल फिर्ता ल्याइयोस्ः एनआरएनए उपाध्यक्ष डा. केसी
कुवेतबाट ३ हजार नेपाली महिला कामदारको तत्काल उद्धार गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एनआरएनए केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले अरू देशमा जस्तो समस्या कुवेतमा नरहेको बताए। डा. केसीले ३ हजार नेपाली महिला कामदारको नेपाल आइपुग्ने लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कुवेत सरकारले नै दिने बताए।
‘३ हजार नेपाली महिला कामदार पिसिआर परीक्षण गरेर फर्किन तयारी अवस्थामा रहेका छन्, कोरोना परीक्षण नगरी नेपाल आउन नपाउने भन्ने नियम बनाएको छ, त्यो पनि भइसकेको छ, अब सरकारले फिर्तीको मिति तोक्नुपर्छ,’ डा. केसीले भने।
नेपाली महिला कामदार फकाउने विषयमा उपाध्यक्ष डा. केसीले पटक–पटक कुवेतस्थित नेपाली राजदूताबासमा कुराकानी गरेका छन्। राजदूतले पनि नेपाली महिला कामदार फिर्तीका सम्बन्धमा सकारात्मक कुरा गरेको केसीले बताए।
‘नेपाल सरकार र कुवेत सरकारबीच समन्वय गर्ने कार्यमा राजदूत रहनुभएको छ, नेपाल सरकारले चाँडै नेपाली लाने प्रक्रिया थाल्ने अपेक्षासहित कुरेर बस्नु भएको छ, आशा गरौं सरकारले नेपाली नागरिकको फिर्तीको प्रक्रिया चाँडै सुरू गर्छ,’ केसीले भने।
विश्वका विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली नागरिकले सम्पूर्ण खर्च आफै व्यहोर्ने बताइसकेका छन्। ‘कतिले आफै पैसा तिरेर फर्किन्छौं भनेका छन्, कुवेतमा रहेका नेपालीहरूको सन्दर्भ फरक छ, पैसा पनि कुवेत सरकारले नै तिरिदिने भएको छ,’ केसीले भने।
नेपाल सरकारले चार्टर्ड फ्लाइट पठाएर वा सञ्चालनको अनुमति दिएर भएपनि ती नेपाली महिलाको उद्धार गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष केसीको धारणा छ। ‘सबैभन्दा बढी समस्या र संकटमा बसेका नेपालीलाई तत्काल फकाउने सरकारको रणनीति हुनुपर्छ,’ डा. केसीले भने।